Nhau - Zvese Zvaunoda Kuti Uzive ZveMota Floor Mats
Zvese Zvaunoda Kuti Uzive ZveMota Floor Mats
Kana tichida kutenga matenga epasi pemota, nzira yekuwana yakanakisa inogadzira
Unogona kutsvaga muGoogle ne "mota mats fekitori", ipapo unogona kuwana mawebhusaiti mazhinji, uye unofanirwa kutonga inova fekitori yemota yemota yaunoda, uye kutarisa izvo mateki emota ndizvo zvaunoda. Kune mamwe marudzi emhando dzakasiyana dzemameti emotokari: kapeti, mateti emota ePV, mateti emota ematehwe, Rubha yemotokariTPE mateki emota, TPR mateki emota.
Tevere iwe unofanirwa kutarisa mhando yematauro emota, akawanda mateki emota anogadzirwa neforoma yemhando dzakasiyana dzemotokari, saka unofanirwa kutarisa kana fekitori iine mamota emota mamodheru iwe aunoda uye unoda kutarisa kana huwandu hwaunoda zvakanaka kuburitsa, fekitori yakawanda ine MOQ hombe. Fekitori yedu yakagadzirira mateti emota mazhinji emakesi emota, Yedu MOQ ndeye 5 setsiti imwe neimwe, uye isu tine mazana emameti emota uye trunk matanda maumbwe.
Ipapo iwe unofanirwa kuziva kana iyo fekitori inogona kukugadzirira iwe, nekuti yako odha ichave yakakura neyedu yakanaka mhando TPE mota mateti, uye iwe zvakare uchawana mumwe mutengi anodikanwa kuti agadzire mold neakakosha mapatani uye logo, icharatidza yako mutsauko wemataresi emotokari mumusika. Iyo yakanaka pateni inounza iwe kutengeswa kwakanaka uye ichakweva vamwe vatengi vatsva. Uye zvakare zvinobatsira kudzikamisa vatengi vako vekare. Bhizinesi rako richava rakakura kwazvo needu TPE mota pasi matai. Fekitori yedu inogona kugadzira iyo pateni uye logo pamwe neyako saizi yekukumbira, inokutendera kuti umire kubva kune vakawanda vatengesi.
Pfungwa yakanyanya kukosha ndeyehunhu, izvi zvakakosha kwazvo, nehunhu hwakanaka, unogona kutengesa kune mutengi, uye mutengi achatengesa zvirinani nehunhu hwakanaka, uyezve vanobva vawedzera huwandu hweodha mune ramangwana. Ichi zvakare chikamu chakakosha kwazvo. Ichi zvakare chinangwa chefekitori yedu. Isu tinoshandisa yakanakisa TPE zvinhu zvemameti emota uye trunk mat, asi nemutengo mumwe chete seimwe fekitori. Tine purofiti shoma, asi mutengi wese akatenga zvigadzirwa kubva kufekitori yedu anogona kuwana mashanu nyeredzi mhinduro yakanaka kubva kumutengi wese, Imwe nguva uve mutengi wedu, zvachose uve mutengi wedu. Isu tinosimbisa nguva yakareba kushandira pamwe nevatengi vese. Zvinhu zvinonyanya kukosha mukugadzira kwedu ndezvekushandisa mutengo mumwe chete kuti zvinhu zvive nani, tinoda kuzvivandudza zvirinani uye zvirinani.
Iyo yekupedzisira poindi iwe yaunoda kutarisisa ipakeji uye kutumira. Iyo yakaderera mhando fekitori inoshandisa yakaderera mhandoTPE zvinhuuye ivo zvakare vanoshandisa yakaderera mhando pasuru. Ichaita kukuvadza kumata emota, iyo yakakosha kwazvo pasuru.
Tinogona kurongedza yega yega seti pcs (driver mat, passenger mat, kumberi mat) mune one katoni, uye isu tinokwanisa kupurinda tsika logo pane iyo katoni. Nenzira iyi, tinogona kutumira takananga kukero yaunoda kana kutumira kuazon yekuchengetera. Isuwo tinogona kurongedza makumi maviri pcs katoni imwe neimwe, nenzira iyi inogona kuchengetedza nzvimbo, tobva tachengeta gungwa rekutakura mutengo, mutengi anogona kurirongedza neyavo makatoni mushure mekuigamuchira.